Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Lucuc na -agbasa » Na -ebi ya: Saint Lucia na -agbasawanye usoro ọnụnọ ya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Saint Lucia na-akpọ ndị ọbịa ka ha bie dị ka mpaghara nwere ọtụtụ ntinye ọhụrụ maka nhọrọ otu afọ.
Njem nlegharị anya nke Saint Lucia na -ewebata nhọrọ ọhụrụ maka mmemme ọnụnọ agbatịkwuru.
Saint Lucia na -agba ndị njem ume ka ha mikpuo onwe ha n'ọdịbendị obodo.
Nhọrọ mmemme Saint Lucia Live ọ dabara na mkpa ezinụlọ, ndị ọrụ nọ n'ime ime, puku afọ na ihe dịka onye njem ọ bụla.
Ndị isi njem nlegharị anya nke Saint Lucia ewebatala nhọrọ ọhụrụ maka mmemme ịnọ ogologo oge a, na nzaghachi maka ọnọdụ njem na mkpa ndị ahịa. Ndị ọbịa nwere ike nabata ndụ agwaetiti ugbu a na Saint Lucia site na iji ọtụtụ ntinye visa ruo otu afọ. Site na nhọrọ abụọ nke mmemme Live it, Saint Lucia na -agba ndị njem ume ka ha mikpuo onwe ha n'ọdịbendị obodo, mgbe ha na -enyocha ịma mma eke ebe a na ezumike ezumike ogologo ma ọ bụ na -arụ ọrụ nke ọma.
Emebere mmemme Saint Lucia Live ya na mbido 2021 maka nleta ruru izu isii. Maka ndị na -achọ nhọrọ ịme ọtụtụ nleta nke ogologo ọ bụla, usoro nke abụọ nke mmemme Live na -enye ndị na -achọ akwụkwọ ohere ịnọ otu afọ nwere ọtụtụ ntinye visa. na ọnụ ahịa nke US dollar 75.
Ndị isi njem nlegharị anya nke Saint Lucia's Na -eme ya mmemme nhọrọ dabara na mkpa ezinụlọ, ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, puku afọ na ihe dịka onye njem ọ bụla. Ndị ọbịa nwere ike jiri aka ha kpebie ọbịbịa ha nwere ogologo oge, ma ọ bụ enwere ike ịhazi njem ha site na ndị ọkachamara Live It raara onwe ha nke na -emepụta ahụmịhe dị mma iji rụọ ọrụ, gwuo egwu, hie ụra ma rie nri site na ntụzịaka nke mpaghara mpaghara raara onwe ya nye.
Mgbe ha nọ na Saint Lucia, ndị ọbịa nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi, ebe a na-enye Wi-Fi n'efu n'agwaetiti ahụ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, obodo nta na ebe ọha. Ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ enyelarị ihe ọrụ dịpụrụ adịpụ na uru pụrụ iche nke na -eme ka ọrụ na oge ezumike ghara ịkpakọba. Ndị anamachọ ihe nwere ike ịhọrọ site na nhọrọ abụọ maka ahụmịhe n'ezie:
Ahụmịhe Ekebere: Ndị Ọkachamara Live It Island ji nlezianya lekọta ya, ọ nweghị nleta abụọ yiri ibe ha! Mmemme imikpu onwe ya na -enye ndị ọbịa ụzọ njem siri ike ka ha wee nyochaa saịtị Saint Lucia na ebe nlegharị anya n'enweghị nsogbu ka ha na -ebi dị ka mpaghara. Ọ bụrụ na ọ na -arụ ọrụ na ndị Ọkachamara Live It Island gụnyere ezumike ezumike, ezumike ezumike & njem nlegharị anya na njem njem & njegharị St. James, ndị ọbịa nwere ike ịhazi njem nke ha iji kwado mkpa na mmasị ha.
Na-ebi ya n'onwe ya: Ndị anamachọ akwụkwọ nwere ike itinye akwụkwọ na Ngalaba Mbata na Ọpụpụ maka visa ntinye ọtụtụ ruo otu afọ site na imeju akwụkwọ anamachọihe Saint Lucia opekata mpe (2) tupu ụbọchị njem. A ga -amara ọkwa ndị anamachọihe n'ime ụbọchị 5 ma ọ bụrụ na ejiri akwụkwọ ozi nkwado nwa oge kwado ngwa ahụ. A ga -akwụ ụgwọ visa na ọdụ ụgbọ elu mgbe ị rutere Saint Lucia, yana akwụkwọ ozi nkwado, ka e nyefee onye ọrụ kọstọm.